cafesuite, cafepro , Handycafe....or others — MYSTERY ZILLION
452 Mobile Devlopment
211 other mobile
cafesuite, cafepro , Handycafe....or others
August 2009 edited February 2011 in Internet & Email
cafesuite, cafepro, Handycafe or others....
အသုံးများတယ်လို့ထင်မိတာကတော့ Cafezee ပါ Full Version ရရင်တော်တော်များများအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်..အခြားသုံးကြတာတွေလည်း အများကြီးပါဘဲ .. ကိုယ် ရင်းနှီးကျွမ်း၀င်မှုရှိတဲ့ ဟာမျိုးကိုဘဲသုံးတာကောင်းပါတယ်.. ဒါမှမဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံထုတ် Cyber Cafe သုံးတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲတွေလည်း ပေါ်နေပါပြီ .. ဒါပေမဲ့ .. တစ်ခြားဟာထက်တော့ ပိုက်ပိုက်ပိုကုန်တယ် .. ကျန်တဲ့service ပိုင်းကတော့ ကျွန်တော်လည်း မသုံးဖူးလို့ သိပ်မသိဘူး ..
mGhAn wrote: »
ကျတော်တော့ cafe suite သုံးတယ်၊အဓိက ကတော့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာပေါ့။အားလုုံုး ကောင်းကြပါတယ်။ crack file နဲ့သုံးတာပါ။
ကျွန်တောကတော့ handy cafe ပိုကြိုက်တယ် UI လည်းပိုလှသလိုပဲ
ကျွန်တော်ကတော့ cafezee 3.9.9 ကို ပိုကြိုက်တယ်
Tayzar001 wrote: »
အစ်ကို သုံးတာလေးကို မျှဝေပေးပါလားခင်ဗျာ.... :-)
ကျွန်တော်သုံးကြည်တာတော့ cafesuite ကော...handycafe ကော ကောင်းပါတယ်။
အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျန်တာတော့ မသုံးဖူးဘူး။။
ကျွန်တော် တိုက်တွန်းချင်တာကတော ့Cafezee ကိုသုံးကြည့်ပါ... တော်တော်ကောင်းပါတယ်..
တိုက်တွန်းရုံသက်သက်ပါ.... ကြိုက်ရာသုံးပါလို ့ပြောပါရစေ....
greyfindor wrote: »
Cafezee လေးများရနိုင်မလားဗျာ ?
တစ်ခုလောက်သိချင်လို့ပါ cafezee 3.3.0 က .pra ဖိုင်ကို cafezee 3.3.9 မှာပြန်သုံးလို့
chitsan wrote: »
ကျွန်တော်လဲ cafezee ပဲသုံးတာ cafezeen 3.9 ရှိတယ် တင်ပေးထားမယ်လေ key ပါတင်ပေးလိုက်မယ်
ဒါဆိုလည်း ကို ဂေးရေ...
တချက်လောက် ကူညီပါအုံး။ အစ်ကို ပြောတဲ့ cafezee သုံးပါမယ်...:D:D:D
ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံတွက်နည်း လေး မျှပါအုံး....:77::77::77:
ကျွန်တော် အရင်ကတော့ cafezee သုံးတယ် သူလဲကောင်းပါတယ် ။အခုနောက်ပို်င်းတော့ Handycafe ပြောင်းသုံးနေတယ် handycafe ကိုတော့ ပိုကြိုက်တယ်......
raysoe wrote: »
့handycafe ရဲ default password ကို ဘယ်လို change လဲသိလာအစ်ကို
sethusoe wrote: »
ဒီ rapidshare က အဆင်မပြေဘူး၊ ကျေးဇူးပြု ပြီ ifile it မှာတင်ပေးနိုင်မလား။
ဘော်ဘော် တို ့ရေ... cafezee 3.6.8 လေးများရှိရင်းမျှပါအုံးဗျို ့.......
crack ဖိုင်လေးပါအပါပေါ့.... :D:D
တော်တာ်လေးကို အရေးကြီးနေလို ့ပါဗျာ...
ကျွန်တော်လဲ cafezee 3.9 ကိုပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ် .
ဒါပေမယ့် ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာရာပေါ့ဗျာ
cybercafe pro သုံးတာပါ သုံးလို ့အဆင်ပြေပါတယ်
အစ်ကိုရေ handy cafe fullversion လေးမျှပါဦး
အလုံး ၂၅ လောက်ရမယ့် ဟာနော်
နောက်ပီး စက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ ့handycafe.com ကိုချိန်းလို့ရလား
screen close ရင်ပေါ်နေတာကိုတစ်ခြားချိန်းလို့ရလား
အကြံပေးတာပါနော်။ ကောင်းတာက user တွေ နဲ ့ရင်းနှီးပီးသားဖြစ်တဲ့ ဆော့၀ဲလ်မျိုးကို သုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ အများအားဖြင့် သုံးကြတာတော့ Cafezee ပါ ညီလေး။ အကြံပေးတာနော်။ ကျွန်တော်တို ့လဲ ဒါပဲသုံးတယ်ခင်ဗျာ။
nawaung wrote: »
အနော်စမ်းတာကတော့၇ဘူးဗျ အဲဒါကြီးကစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်။စက်မြင့်၇င်ကိစ္စမရှိဘူးနိမ့်၇င် cpu usage memory usage က cafezee ထက်များတယ်လေး။ကျွန်တော်က cafezee ပြန်ပြောင်းသုံးနေပါတယ်။ စက်အလုံး 20 ကတော့၇ပါတယ် ဗျာ။25လုံးတော့မသိဘူး။
Cafezee 3.3.9 အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ Setting ထည့်တဲ့ နည်းလေး Server မှာ ထည့်တာရော.. Clinet မှာ ထည့်တာေ၇ာ.ကို တဆင့်ချင်း ပြောပြပေးစေ.ချင်ပါတယ်.ကျွန်တော်က တစ်ခါမှ မသုံးဖူးသေးလို့ပါ...အခုမှ စမ်းသုံးချင်လို့ပါ..ဒီအမ်ဇက်.ထဲမှာလည်းရှာတော့ ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ကြည့်ပါတယ်. အဆင်မပြေလို့ပါ..... ကျေး ဇူး အများကြီးတင်တယ်နော်..:77::77:
မှာ အီးမေလ် နဲ့register သွားလုပ်..မေးလ် ထဲကို ပို့ပေးလိမ့်မယ်..ကီးတွေ ..
အဲတာလေး နဲ ့သုံးဗျာ..:D Handy cafe က ကြော်ငြာ ပါ လို ့စိတ်ညစ်ရဘူးနော်..
Cafezee. အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ Setting. ထည့်နည်း လေး ရယ်. ငွေတွက်နည်းလေး ရယ်ကို.အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်.. ပြီးတော့ CafeSuite ရဲ့.Setting ထည့််နည်းလေးနဲ့ ငွေတွက်နည်းလေးတွေကို.လည်း . အသေးစိတ်လေး ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်... ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်. screen short လေး နဲ့ တင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့.. အတိုင်းထက်အလွန်.. ပေါ့.ဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း ဒီ အမ်ဇက်ထဲမှာ လှည့်ရှာပါသေးတယ်... တွေ့တာတွေက.သိပ်မပြည့်စုံတော့ စမ်းတာ အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့ပါ... အမ်ဇက်.က..အကိုတွေ အမတွေကို. အားကိုးပါတယ်ဗျာ...
အားလု့ံးကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်.ခင်ဗျာ.......................
Handy Cafe ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာ။
Cafezee လဲသုံးဖူးပါတယ်။ Handy Cafe လောက်တော့မကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ပြီးတော့ Handy Cafe က User Friendly ဖြစ်တယ်လေ။
ပြီးတော့ သူ့မှာက built-in Features လဲစုံတယ်လေ။
Remote Management, Printer Tracking, Screen Shoot, Restriction, Application Handler, Firewall လိုမျိုး Features တွေအပြင် အခြား Features တွေလဲကျန်ပါသေးတယ်။
Game ဆိုင် Only ဆိုရင်တော့ Handy Cafe မသုံးစေလိုပါ။
သူက Online ရှိမှ Register လုပ်လို့ရတာလေ။ မဟုတ်ရင် Network ထဲက Random PC3လုံးပဲ Server မှာပေါ်တာရယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ကိုယ်နဲ့ ပိုအဆင်ပြေတဲ့ Software ကိုသုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
minlwin121 wrote: »
Handy Cafe ရဲ့ ကြော်ညာတွေက Block လုပ်လို့ရပါတယ်။
Handy Cafe ရဲ့ကြော်ညာတွေကတော့ ad.handycafe.com နဲ့ search.handycafe.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Handy Cafe က အဲ့ဒီ Link နှစ်ခုနဲ့ Sync မဖြစ်လို့ရှိရင် ကြော်ညာတွေမပေါ်ပါဘူး။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီ Link နှစ်ခုကို အဆင်ပြေသလို Block လုပ်ရပါမယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ Linksys Router လေးသုံးနေတော့
အဲ့ဒီ Router ရဲ့ Firewall configuration ထဲမှာ ခုနက Link နှစ်ခု ထည့်လိုက်ပါတယ်။
C:\_Windows\_System32\_drivers\_etc ထဲမှာရှိတဲ့ Hosts ဆိုတဲ့ Files လေးကိုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ File လေးကို Open with ----> Note pad ဆိုပြီး အဲ့ဒီ Note pad လေးထဲက အောက်ဆုံးအကြောင်းမှာ ဒီစာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်း ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင် Save လုပ်လိုက်ပါ။ (File က Read Only ဖြစ်နေရင် Read Only ကိုဖြုတ်ပြီးမှ Save ပါ။)
ပြီးရင် Restart ချလိုက်ပေါ့။ ပြန်တက်လာရင် Handy Cafe မှာ ကြော်ညာမပေါ်တော့တာကိုတွေ့မှာပါ။
ဒါက ကျွန်တော်သိတဲ့နည်းတွေပါ။ ကျန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေလဲရှိအုံးမှာပါ။
ဘာလိုနည်းပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိက က ad.handycafe.com နဲ့ search.handycafe.com ကိုပိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Western wrote: »
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာသုံးတာကတော့ antamedia internet cafe software ပါ
တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ feature တွေလည်းတော်တော်စုံပါတယ်။
gmail address ပြော အကို setting ချနည်းပို့ပေးလိုက်မယ် !
ဘယ်ကထုပ်တာမသိဘူးနော်။ကျွန်တော်မသိလို့ မကြားဘူးသေးလို့ပါ။ပြောပြပေးပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
TP Link Router မှာကျတော့ ဘယ်လိုပိတ်ရတာလဲရှင့်..
ံHandy Cafe လည်း မဆိုးပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် သူက အင်တာနက်လိုင်းကို စားမယ်ထင်တယ် နောက်ထပ် Cafezee လည်းမဆိုးဘူး ။ Handy Cafe သုံးကြည့်ပေါ့ backup လုပ်ရတာလည်း လွယ်တယ် ။ restore လုပ်ချင်လည်း လွယ်တယ် သုံးကြည့်ပါ / Cafezee ကတော့ အင်တာနက်လိုင်းကို သူက ဆွဲမသုံးတော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ။ အကို စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ ။ ပိုကောင်းတာ တင်ကြည့်ပါ တစ်သမတ်တည်း မသုံးတာကောင်းပါတယ် software ကို
zawmio wrote: »
အဆင်ပြေပါတယ် ။ crack file ပါရှိရင် တင်ပေးလိုက်လေ မဟုတ်ရင် တိုင်ပတ်သွားလိမ့်မယ် သူ့ခမျာ
ကျွန်တော်ကတော့ cybercafe pro5ကိုသုံးတယ်...အဆင်တော့ပြေပါတယ်...ည ၁၂ ထိုးရင်တော့ account တွေကျကုန်တယ်ဗျ...တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိူးစမ်းကြည့်ဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူးဗျ..ဆိုင်ကလည်းဖွင့်နေတာဆိုတော့...
ဒီပို့စ်ရဲ့ ရှေ့ပိုင်းမှာတုန်းကတော့ Cafezee စမ်းသုံးမလို့ အသုံးပြုပုံလေးကို မေးထားပါတယ်ဗျာ။ အခုတော့ အဲဒါမသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး အခု CafeSuite 3.49 ကိုပဲ Crack ဖိုင်နဲ့ သုံးနေတာ တော်တော် အဆင်ပြေနေပါတယ်။ဗျာ။ cafesuit သုံးချင်ရင်တော့ ပြောကြပါ။ ကျွန်တော်သိတာလေးတွေ ပြန်ပြောပြပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ဆော့ဝဲလ် လိုချင်ရင်လည်း လင့်ပေးလိုက်ပါမယ်။
upload တင်ထားတာ နည်းနည်း ကြာနေလို့ အဆင်မပြေရင်တော့ ပြန်ပြောကြပါဗျာ။ တခြားနည်းလမ်းနဲ့ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။ တကယ်လို့ အသုံးပြုပုံ သိချင်ရင်တော့ မေးပို့ပြီး မေးလို့ရပါတယ်။ ပြန်ပို့ပြီးပြောပြပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ ဆိုဒ်ထဲမှာ မေးလိပ်စာရှိပါတယ်။
Cafezee ကို Licence Version နဲ့ သုံးချင်သူများအတွက် SpeedWay Online Service မှ ၀န်ဆောင်မှု ပြုလုပ်ပေးနေပါပြီ
cafezee 3.9.9 4.2 version များအား တ၇ား၀င် Lifetime အတွက် Licence key များ ေ၇ာင်းချပေးနေပါသည။်
Lifetime သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်၇န်လိပ်စာက တော့
Office Address No.185 Room 1st floor No.2/B 29st (Upper Block) Pabedan Township Yangon *Speedway Online Service Phone 095178391*
အမှတ် ၁၈၅ အခန်းအမှတ် ၂/B ပထမထပ် ၂၉ လမ်း (အထက်) ပန်းဘဲတန်းမြုံ့နယ် ၇န်ကုန်မြို့ *Speedway Online Service ဖုန်း 095178391*
၀န်ဆောင်မှုတိုင်းအား ချက်ချင်း အသုံးပြုနိုင်၇န် အမြန်ဆုံးဆောင်၇ွက်ပေးနေပါသည်။
နယ်မှ ၀ယ်ယူလိုသူများ အတွက် ငွေလွဲလိုပါက KBZ BANK Account Number *0401110002342* သို့လွဲနိုင်ပါသည်။
*Our Business Hours
9:00 AMTo 7:00PM (Monday to Saturday)*
*9:00 AM to 2:00PM (On Sunday)*
handy cafe သုံးပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ cafezee က microsoft access ရှိရုံနဲ့တင် hack လို့ရပါတယ်။ handy cafe ကတော့တော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်။cafezee ထက်လည်း function များပါတယ်။
handycafe ကိုgame ဆိုင်မှာသုံးတဲ့နည်းတွေရှိပါတယ်ဗျ။ ကျနော်ရေးစမ်းပြီးကလိထားတဲ့ crack လေးရှိတယ်လေ။clients တွေအားလုံးတက်ပါတယ်။ဟီးးဟီးးအဲ့လိုကလိတာ။ လိုချင်ရင်တော့ [email protected] ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။:cool::cool::cool::cool:
handy cafe က ဆာဗာမဟုတ်တဲ့တခြား client စက်တလုံးမှာ handy cafe sever ကိုသွင်းလိုက်ရင် အဲဒီ client မှာရှိတဲ့ sever က အရင်လုပ်ထားတဲ့ sever လိုမျိုးထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ် ဆာဗာ နှစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ ၊ cafe suite မှာဆိုရင် client ip ကို ဆာဗာမှာ add လုပ်ပေးရတယ် client မှာလဲ sever ip ကိုထည့်ပေးရပါတယ် handy cafe မှာတော့ အဲလိုမတောင်းပဲနဲ့ client စက်တလုံးမှာ sever ကို install လုပ်လိုက်တာနဲ့ sever လိုမျိုးထိန်းချုပ်ခွင့်တွေရပါသွားပါတယ်ခင်ဗျာ အဲလိုမျိုး client မှာ sever သွင်းလဲဆာဗာလိုမျိုးထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ကာကွယ်နညး်လေးများရှိမလား၊ လွယ်ပါတယ် ဆော့၀ဲလ်အင်စတောလုပ်မရအောင်ပိတ်ထားလိုက်ပေါ့ လို့ပြောကြရင်လဲ ခံရမှာပါပဲ တခြားနညး်လမ်းလေးပြောကြပါနော်
handy cafe သုံးတာ ကြော်ငြာတွေက ခုထိပိတ်လို့လဲမရသေးဘူး...ရှေ့က အကိုတွေပြောသလိုလုပ်တာလဲမရဘူးး... သုံးတဲ့ router က TP Link ပါ...ပိတ်ရမယ့်နေရာ ရှာတာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေလို့ လုပ်ကြပါဦးး....
handycafe သုံးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
အဲ့ဒါက သုံးရတာ ပိုအဆင်ပြေသလိုပဲ............
၁၀လုံးကျော်သုံးလို့ရမဲ့ crack လေးများမရှိဘူးလားဗျာ ... ရှိရင် မျှေ၀ပေးပါဦး... ကျွန်တော့စီရှိတဲ့ server crack က 6.64 Mb ရှိတယ်ဗျ...
i think you can be explain it
because it isahandycafe-popup problem
i want to close it in client
i have been these two line copy in etc
but it is auto delete
so, i can't do it
so, i want to close it in client
I use TP-WR941N (tp-link router)
how can i configuration it
please answer me and help me